Somali, John: Lesson 058 - Dembigu waa addoommo (Yooxanaa 8:30-36) | Waters of Life
Home -- Somali -- John - 058 (Sin is bondage)
YOOXANAA - XIDHIIDHA ISTICMAALKA GUUD MUGDIGA
Daraasad ku jirta Injiilka Ciise sida ku xusan Yooxanaa
QEYBTA 2 - XIDHIIDHA ISTICMAALKAGUUD MUGDIGA (YOOXANAA 5:1 - 11:54)
C - CIISE’ DAMBE U DAMBEYNAYO JERUSALEM (YOOXANAA 7:1 - 11:54) Mawduuca: QAYBTA DHALINYARADA IYO NIDAAMKA
1. Ereyada Ciise oo ah iiddii taambuugyada (Yooxanaa 7:1 - 8:59)
e) Dembigu waa addoommo (Yooxanaa 8:30-36)
30 Intuu waxyaalahaas ku hadlayay, dad badan ayaa rumaystay isaga. 31 Sidaa daraaddeed Ciise wuxuu ku yidhi Yuhuuddii isaga rumaysatay, Haddaad ereygayga ku sii socotaan, runtii waxaad tihiin xertayda. 32 Oo waxaad garan doontaan runta; runtiina waa idin xorayn doontaa."
Mawduucyada hoose ee Masiixa ee marqaatiyaasha ayaa saameyn ku yeeshay dhegeystayaasha badan. Waxay isku dayeen inay rumaystaan isaga oo ka yimid Ilaah. Ciise waxa uu dareemay kalsoonidooda isaga oo aqbalay inay diyaar u yihiin inay dhegaystaan. Waxa uu ku boorriyay inaanu rumaysnayn Injiilka, laakiin inuu ka fikiro ereyadiisa oo uu ku biiro, si uu isaga ugu sii noolaado, sida laanta geedka canabka ah. si uu Ruuxa qalbiyadooda ugu fikiro qalbiyadooda iyo fikirkiisa iyadoo aan loo baahnayn; si ay ugu dhaqaajiyaan si ay u fuliyaan rabitaankiisa ficil ahaan. Ku alla kii sida Masiixa ah u rumaysto wuxuu maqlaa kuwa xaqa ah.
Xaqiiqadu maaha fikrad, laakiin xaqiiqada dhabta ah ee aan ku wadaagno dhaqanka nolosheena.
Runtii Ilaah waa ugu horrayntii hadalka oo dhan oo si daacad ah iyo xigmad leh; Marka labaad waa in la ogaado Ilaah oo ah Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ee midnimada jacaylka iyo dadaalka. Marka aynu ku dhex jirno Masiixa, waxaan ogaannaa quruxda Quduuska Quduuska ah.
Ogaanshaha Ilaah wuxuu bedelayaa nolosheena. Waxaan ognahay Ilaah ilaa xadkeenna aan jecelno dadka kale. Kii aan jecel yahay wuxuu maqlaa kii Ilaah. Marka aynu ku baranno ereyada Masiixa waxaan leenahay nafsadeena. Si loola hadlo towbad keenka ama waajibaadka sharciyeynta ma naga xejin doono addoonsiga dembiga; waxa ogaan doona jacaylka Ilaah, aqbalaadda Wiilka cafiska, iyo soo socota Ruuxa noloshiisa. Jacaylka Ilaah waa waxa uu jebin karo silsiladaha ismaaciilnimada iyo maskaxda.
33 Waxay ugu jawaabeen, Farcankii Ibraahim baannu nahay, oo weligayo addoommo ninna uma lihin; Sidee baad u leedahay, Waa laydin xorayn doonaa? 34 Ciise ayaa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii kasta oo dembi sameeyaa waa addoonkii dembiga. 35 Oo addoonkuna guriga kuma sii jiro. Wiil wuxuu weligiis sii jiraa. 36 Sidaas aawadeed haddii Wiilku idin xoreeyo, runtii xor baad ahaan doontaan.
Yuhuuddu way gunuuneceen, oo awowayaashood waxay ku noolaan jireen boqorradii Fircoon ee Fircoon ku sugnaa, oo waxay nafsadeen inay naftooda ku xoreeyaan xoogga Ilaah, maxaa yeelay, wuxuu iyaga ka soo saaray hubkaas (Baxniintii 20:2). Haddaba Ciise ayaa hadalkan ku adkeeyey goortuu gaalnimo ku furay.
Ciise waa inuu ku booriyaa kibirka kuwa ku bilaabay inuu rumaysto isaga. Wuxuu tusay inay yihiin addoommo dembi iyo maxaabiis shaydaan ah. Haddii aan ogaanno miisaankii dhintay ee addoonkayaga, ma naqaano badbaadada. Kii isjira inuu u adkaysto dembigiisii wuxuu keenaa kii Ilaah askar ka celiyaa. Halkan waxaan ku aragnaa sababta sababta dad badan oo aan u raadin Ciise; waa in ay u malaynayaan in naftooda u baahnayn badbaadintiisa.
Ciise wuxuu si adag u sheegayaa, "Ku alla kii dembiga, addoonta addoonta ah wuxuu noqonayaa garsoore dembiga, dad badan oo dhalinyaro ah ayaa noloshooda ku bilaabaya been, been iyo garsoor, waxay ku ciyaareen dembiga oo ay ku dhex qiyaasaan malayshiga, ugu dambeyntii waxay go'aansadeen in ay u baxaan oo ay qorsheeyaan oo waxay isku dayeen inay nuuradda ka dhigaan, oo waxay ku yidhaahdeen, Waannu ku baryaynaaye, bal eega, iyagu waxay ku hadlaan hadal faan ah oo aan micnahooda ku lahaan. oo waxay odhan doonaan, Waxaa jiri doona dembiile aan dhowaan dhergin, oo dembiyadoodiina wuu ka qiirooday, oo xaqnimaduna waxay ka dambaysaa kan caqliga leh mooyaane. Shaydaanku wuxuu ku ciyaaraa qulqulo dabiici ah sida duufaan leh oo leh caleen qallalan.
Haddaba Wiilka Ilaah wuxuu ku hadlaa ereygiisa boqornimada, "Haddaba waan idinla jiraa, oo waan ogahay murwadkiinna, waan idin xoogayn doonaa, waanan idinka xorayn doonaa, oo dembiyadiinnana sooma geli doontaan, oo innaba mar dambe sooma aad xusuusan doonin. iyo inaan sharcigu been ku sheegin, waayo, aniga ayaa ah Rabbiga kiisa subkan, wuuna xannaanayn doonaa, oo wuxuu kaa dhigi doonaa xoog lihi. Shaydaanka Shaydaanku wuxuu kugu soo kicin doonaa kun iyo labaatanaad, waad ku turunturan doontaa, laakiinse adigu ma ihid sida addoonnimada, laakiin sidii doorashooyin loogu adkaysto oo kale.
Waayo, weligiis iyo weligiisba Ilaah baad qaynuunteenda ku sakhraamaysaan si aad dhiig u iibsataan, oo u ilaahyo kale ayaad ka iibiseen carruurtiinna, oo waxaad dhaafteen inaad Rabbiga ula dagaallantid. adeegga iyo mahadnaqa, waxaan ahay mid ka mid ah xoriyataliyihii kaa soo badbaadiyay xabsiga ku jira dembiga ilaaha Ilaah, waxaan ahay Wiilka Ilaah, oo awood u leh inuu xor u ahaado dhammaan kuwa codka dhageysta. "
DUCO: Rabbi Ciise, waannu kuu caabudaynaa oo kugu ammaanaynaa, waayo waxaad tahay badbaadiyaha Badbaadiyaha ah, kan iskutallaabtiisi naga siistay ugu dambayntii shaydaankii shaydaanka. Xumaanteenna oo dhan waannu cafinnay. Adigu waad nadiifsan tihiin, sidii addoommo oo kale ah oo aan khiyaano lahayn, laakiinse inaannu Ilaah u wada nimaadno siday maantadan tahay oo kale.
Sidee loola wareegi karaa dhab ahaantii?
BAARIS - 3
Akhristaha qaaliga ah,
noogu soo dir jawaabaha saxda ah 17 ka mid ah 19-ka su'aalahan. Waxaanu kuu soo diri doonnaa dhamaadka daraasaddan taxane ah.
Waa maxay qarsoodiga ah ee quudinta shan kun?
Maxaa sababay Ciise muxuu diidey in lagu tiriyo boqorka faraha badan?
Sidee Ciise ugu hogaamiyay dadka inay doonayaan kibista rumaysadka naftiisa?
Maxay macnaheedu tahay "Bread of Life"?
Sidee Ciise ugu jawaabay gunuentiisa dhagaystayaashiisa?
Maxay Ciise u dhagaysteen dhagaystayaashiisa in ay u lahaayeen inay cunaan jidhkiisa oo ay cabbaan dhiiggiisa?
Sidee ayaa Ruuxa noloshihiisu ugu biiray jidhka Masiixa?
Maxay yihiin saameynaha markhaatiga Butros?
Maxay dunidu neceb tahay Ciise?
Maxaa caddaynaya in injiilka uu ka yimid Ilaah?
Maxay tahay sababta Ciise yahay qof keligiis ah oo si dhab ah ogyahay Ilaah?
Ciise muxuu saadaaliyay mustaqbalkiisa?
Maxay Ciise u leedahay xaq u leedahay inuu yidhaahdo, "Qof hadduu harraadsan yahay ha yimaado oo ha cabbo?"
Maxay wadaaddadu iyo Faarisiyiintu u cunaan dadka caadiga ah?
Maxay gabdhihii jaahilnimadu u jebin waayeen Jeermis?
Sidee markhaati u ah Ciise oo u iftiimiyay iftiinka dunidu waxay la xidhiidhaan aqoonta Aabbaha jannada?
Muxuu rumaysadka kan ka midka ah ee ku dhawaaqay naftiisa "anigu isagaa" macnahiisu?
Sidee Ciise ugu dhawaaqay joogitaankiisa Quduuska Quduuska ah?
Xasuuso inaad ku qorto magacaaga iyo cinwaanka buuxa bogga jawaabaha ee su'aalaha, ma aha oo keliya bashqadda. U dir cinwaankan:
Page last modified on March 11, 2020, at 10:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)